11ka astaamood ee cusub ee Android 11 ee horeyba halkan u joogey | Androidsis
Manuel Ramirez | | Noticias, Noocyada Android
Android 11 waa halkaan kadib bilahaas horumarka ah horusocodka horumariyaha iyo inay na tusayeen qaar ka mid ah wararkooda ugu muhiimsan. Waxaan sameyn doonnaa soo koobid ku saabsan waxa ay qaadaneyso in la helo Android 11 oo saldhig u ah lakabyada caadada u ah ama kuwa leh Pixel.
Iyo iyada Google waxaa lagu soo koobay 11 war waxa lagu garto noocan cusub ee Android ah oo imanaya maalmahan iyo sidoo kale bilaha soo socda taleefano kale oo badan. U tag.
1 11ka cusub ee Android 11
1.1 Wadahadalka meesha ay ku quseeyaan guddiga ogeysiiska
1.2 Goobooyin wada sheekeysi sabbaynaya
1.3 Ugu dambeyntii: shaashadda duubista asal ahaan Android 11
1.4 Xakamaynta wanaagsan ee otomaatiga guriga
1.5 Xakamaynta wanaagsan ee multimedia
1.6 Aaladda loo yaqaan 'Auto Auto' ee qof walba (inta gaarigaagu ku habboon yahay)
1.7 Xakameyn weyn oo ku saabsan rukhsadaha
1.8 Dib u dejinta rukhsadaha barnaamijyada aynaan inta badan isticmaalin
1.9 Cusbooneysiinta Module ee nidaamka Google Play
1.10 Shirkad Android
1.11 Milkiilayaasha Pixel 2 iyo wixii ka sareeya
11ka cusub ee Android 11
Iyada oo madaahibtaas oo ku saleysan tiro isla markaana ka tagaysa magacyadaas macaan, Android 11 waxay la timid rabitaan badan oo ah inay bixiyaan a waayo-aragnimo fiican faahfaahinta qaar ka mid ah taasi waxay xitaa naga badbaadin doontaa rakibida barnaamijyada dhinac saddexaad.
Wadahadalka meesha ay ku quseeyaan guddiga ogeysiiska
Kuwa ugu horreeya ee riwaayadahaas ayaa ah meel u gaar ah oo u qaadan doonta inay iyadu leedahay wada sheekaysigaas oo dhan iyo sheekaysiga aan ku hayno barnaamijyada badan ee jira maanta sababahan awgood.
Xitaa booskan ku yaal Waxaan lahaan doonnaa awood aan ku kala hormarino sheekaysigaas oo aan mar walba danaynayno inaan ku qabanno bogga hore. Taasi waa, wada sheekaysiga annaga noo khuseeya ayaa halkaa joogi doona marka hore.
Goobooyin wada sheekeysi sabbaynaya
Kuwaas oo caan ah sabeynaya goobooyin facebook messenger hadda iyagu waa jidka loo maro barnaamij kasta oo kale oo lagu sheekeysto oo aan ku haysanno Android 11. Taasi waa, waannu laaban karnaa oo waxaan u tagi karnaa wadahadal wadahadal leh xumbo sii jiri doonta sabayn sida Messenger-ka oo kale.
Haa, waan nahay yeelashada sheeko xariir ah iyada oo loo marayo mid ka mid ah barnaamijyadeenna aan jecel nahay, waan ku laaban karnaa adigoon furin barnaamijka weyn. Marka shaqooyin badan ayaa ku soo laabanaya si ay u qaataan doorka hoggaamineed ee ay ku habboon yihiin nidaamka sida Android; ha ilaawin habkan ALLE ee xisaabiyaha Samsung ee shaqo badan.
Ugu dambeyntii: shaashadda duubista asal ahaan Android 11
Mid ka mid ah dalabyadii ugu waaweynaa ee ay soo bandhigeen bulshada Android ayaa ahaa la'aanta duubista shaashadda ee lagu dhisay nidaamka. Waxaan ugu dambeyntii halkan ku haynaa halkan awoodi karaan inay qabtaan oo ay wadaagaan waxa ka dhaca shaashadda.
Waxaad awoodi kartaa wax ku duub codka makarafoonka, qalabka, ama labadaba iyada oo aan loo baahnayn in la rakibo barnaamij dhinac saddexaad ah; habka, waxaan kugula talineynaa barnaamijyadan si loogu duubo shaashadda Haddii aadan dooran inaad awood u yeelato Android 11.
Xakamaynta wanaagsan ee otomaatiga guriga
Waxaan horeyba u haysannay waqti kasta qalab badan oo kuxiran guriga iyo Android 11 waxay u timaaddaa inay ku darto waayo-aragnimadan. In Android 11 waxaan ka heli karnaa dhammaan aaladaha casriga ah ee isku xiran meel ka mid ah.
Sameynta a riix badhanka badhanka waxaan aadi doonnaa xakamaynta heerkulbeegga, ama taxanaha nalalka casriga ah ee aan guriga ku dhignay.
Xakamaynta wanaagsan ee multimedia
Google raac dib u naqshadaynta wax kasta oo ku lug leh dib u soo celinta warbaahinta badan Oo markan waxay xooga saareen isbeddelka u dhexeeya aaladaha kala duwan ee soo saara muusigeenna, fiidiyowyada ama sawirradeenna.
Si kale haddii loo dhigo, waxaan ka tagi karnaa dhageysiga heesaha aan ugu jecel nahay 'Spotify' iyada oo loo marayo samaacadaha dhegaha, illaa iyaga ka saar oo si toos ah ugu dheji kuwa ku hadla bluetooth in aan ku xirnay.
Aaladda loo yaqaan 'Auto Auto' ee qof walba (inta gaarigaagu ku habboon yahay)
Iyadoo waxay kuxirantahay soosaaraha gaarigaaga iyo sanadka Si aad u taageerto Android Auto, illaa intaad haysatid, Android 11 waxay ku socon doontaa Android Auto iyada oo aan wax dhibaato ah. Dhammaan taleefannada leh noocyadan cusub ayaa awoodi doona inay adeegsadaan.
Xakameyn weyn oo ku saabsan rukhsadaha
Wuxuu xidhayaa ah lahjad ku saabsan ilaalinta walxahaas kaas oo waxyeelo u gaysan kara arimahayaga gaarka ah sida makarafoonka ama kamarada. Haddii aan helnay codsi rukhsad ah in aan u isticmaalno cunsurradaas, hadda, markii adeegsiga iyaga mar kale loo baahan yahay, oggolaanshaha isticmaalaha ayaa mar labaad la codsan doonaa
Dib u dejinta rukhsadaha barnaamijyada aynaan inta badan isticmaalin
Android 11 ayaa dib udajiso rukhsadaha barnaamijyadan in aanaan badanaa u isticmaalin ka hortagga helitaanka xogteena. Xilliga aan mar kale adeegsaneyno arjigaas, Android 11 ayaa na weydiin doonta inaan siino rukhsad multimedia, makarafoon iwm
Cusbooneysiinta Module ee nidaamka Google Play
Ujeedada Google waa isticmaal Google Play si aad ugu cusbooneysiiso nidaamka modules. Si kale haddii loo dhigo, cusbooneysiinta amniga iyo asturnaanta ayaa ku dhici doonta dariiqaas.
Marka waxaan arki doonaa cusbooneysiinta nidaamka Android adigoon sugin cusboonaysiinta nidaamka weyn. Wax cusub oo ah in laga digtoonaado sababtoo ah xoogga ay siin karto Android nuxur ahaan.
Aad iyo aad baan u aragnaa warar dheeraad ah oo la xiriira «Enterprise» taasina waxay ku xiran tahay adeegsiga xirfadeed ee la siiyo mobilada leh Android. Waa inay la xiriirtaa Android 11 helitaanka waxyaabahaas gaarka ah iyo tallaabooyinka amniga ee aad ku haysato qalab loogu talagalay isticmaalka xirfadleyda.
Un astaan ​​shaqo oo siinaysa waaxda IT-ga qalab aad ugu shaqeysid aalad koontaroolka fog adiga oo aan ku xadgudbin macluumaadkaaga shaqsi ama waxqabadka aad ku leedahay taleefanka.
Milkiilayaasha Pixel 2 iyo wixii ka sareeya
Warka ayaa loo heli doonaa abaabul oo u maamul taleefankaaga sida soo jeedinta barnaamijka guriga iyadoo loo raacayo hawl maalmeedka maalinlaha ah ee aan fulino maalinteena maalinlaha ah.
Oo iyana waa 11 qaababka cusub ee Android 11 kuwaas oo bilaabay inay saacado ku yimaadaan qaar ka mid ah Pixel, OnePlus, Xioami, OPPO iyo realme. Hadda si loo ogaado khibradaha cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Android 11 waa halkaan iyo warkeeda ugu weyn ee 11
Codsiga Podcast-ka Google wuxuu ku darayaa badhanka Kabka dhacdada aan ciyaareyno
Redmi 9i horeyba waxay u laheyd taariikh soo bandhigis waana taleefanka xiga ee ugu raqiisan